u-Van Noordwyk ufuna i-SA U19s ihlasele kuma-Youth ODIs okugcina
Umqeqeshi wokushwiba wama-Coca-Cola South Africa U19s, u-Chris van Noordwyk, usecele iqembu lakhe likhombisa umoya wokulwa ngaphambi kwama-Youth One-Day International (ODI) amabili okugcina bedlala ne-Pakistan, ezoqala e-Chatsworth ngoLwesihlanu.
Iqembu lakwi-sub-continent lingaphambili kwi-series yemidlalo eyisikhombisa ngo-5-0 kulandela ukunqoba ngama-runs awu-116 e-Pietermaritzburg ngoLwesibili futhi u-van Noordwyk uthemba ukubuya kokuzithemba eqenjini ngokunqoba imidlalo yokugcina kwi-series bedlala neqembu elinethalente i-Pakistan.
“Imiphumela ayihambanga ngendlela yethu. Empeleni bayiqembu elingcono kunathi,” esho kwi-net practice yokugcina yeqembu.
“Banabadlali bekhilikithi abenza kahle; amathuba amakhulu bawadlala kahle futhi asikenzi kahle sibhekene nabo. Abafana bayazama, futhi angiliboni iphutha kumsebenzi wabo, kodwa sidlala nabadlali abalunge kakhulu. Isikhala phakathi kwamaqembu womabili, ngebhadi, sikhulu kakhulu futhi kumele sikuvale lokho. Kumele sibheke ezinye izinto ngeso lokhozi, kumele sibheke ezinye izinhlanganiso kanye nendlela esidlala ngayo futhi kumele sibhekane nalezo zinkinga.”
“Kuqhutshekelwa phambili, sinemidlalo embili esele, ngethemba singavala isikhala futhi sinqobe ngoba kudingeka ukubuyisa ukuzithemba kwikhempu futhi kumele sizikhombise ukuthi kusifanele ukuba kulelizinga,” enezezela u-Van Noordwyk.
Ngebhola, i-South Africa iqala ngasemuva, ngenxa ka-Haider Ali we-Pakistan, othole ama-runs awu-278, okubalwa khona amakhulu amabili nama-runs aphezulu u-116. Lomdlali ovula ngokushaya ubheka ukuhlasela kusukela kuqala i-innings, efaka u-Achille Cloete (6) no-Lifa Ntanzi (5) ngaphansi kwencindezi, nokho benezinti eziwu-11 phakathi kwabo.
“Mihle imizamo yabafana. Sibhekene nomdlali ovula umdlalo lapha, engikholwa ukuthi usezingeni lezizwe futhi angeke sivike ngalokho,” kuchaza u-Van Noordwyk.
“Umdlali olungile futhi ongena kumdlalo futhi acindezele abasishwibelayo. Ngakho, kumele sisebenze ngasemqondweni kanye nezinto ezimbalwa zobuchwepheshe,” esho eqhubeka.
“Ngasekushwibeni, sishwibe kwizinti ezilungile, angeke ngobone iphutha lapho, kodwa sidlala neqembu elizimele kahle. Asiviki ngalokho futhi kumele siqhubeke sisebenze kanzima futhi sihlasele.”
Njengoba imidlalo embili yokugcina ye-series izophindela e-Chatsworth Oval, lapho okwadlalelwa khona i-Youth ODI yokuqala futhi i-Pakistan yanqoba ngama-runs awu-17, u-Van Noordwyk uyalijabulela ithuba lokujika izinto futhi ucele iqembu liphakame futhi likhombise isimilo.
“Kumdlalo wokuqala, sababeka ku-150/8, sasingaphambili kwaze kwafika i-over yesi-37/38 bese bafika ku-223 ngakho ngicabanga ukuthi abashwibayo bakhululekile kulenkundla. Ibukeka iyinke inti, ngakho kumele sihlole ngokushesha futhi sikhombise isimilo. Yilokho engizokucela kubafana; ukukhombisa isimilo. Isimo esihlukile futhi ngithemba singajwayela kodwa siphinde siqiniseke ukuthi sikhuphukela phezulu.”
“Kumele sidlale kahle futhi sinike abadlali ukuzithemba futhi sibavumele bakhululeke futhi sikujike lokhu,” esho evala u-Van Noordwyk.
Umdlalo we-Youth ODI wesithupha uzodlalwa ngoLwesihlanu, 05 July e-Chatsworth kusukela ngo-09h00, kulandele umdlalo wesikhombisa futhi wokugcina ngeSonto, 07 July.
Ukuhamba kwawo kuzotholakala ezinkundleni zokuxhumana ze-Cricket South Africa ku-Facebook (www.facebook.com/cricketsouthafrica) no-Twitter (www.twitter.com/officialcsa).
Two new caps for SA U19s in fifth Youth ODI It’s about believing in the processes, says Mahatlane Louw wants SA U19s to focus on team spirit and execution in third Youth ODI All-round Afridi the difference for Pakistan against SA U19s in first Youth ODI SA U19s ready for opening Youth ODI showdown against Pakistan CSA announces SA U19 pre-World Cup fixtures against India, Zimbabwe and New Zealand CSA confirm U19 inbound tour vs Pakistan, name touring squad National U19 camp underway in Pretoria Montgomery, Molefe help SA U19s end tour on a positive note SA U19s have shown signs of improvement – Montgomery SA U19s narrowly miss out on Youth ODI victory